warkii.com » Kenya oo Xaalad halis ah ku jirta iyo Uhuru oo lagu cadaadinayo inuu la heshiyo Somalia
Kenya oo Xaalad halis ah ku jirta iyo Uhuru oo lagu cadaadinayo inuu la heshiyo Somalia
Beeraleyda noocyada kala duwan ee qaadka Kenya gaar ahaan nooca loo yaqaan miraaga ayaa si weyn uga murugeysan suuq la’aanta ku dhacday kadib markii dowladda Somalia ay joojisay KAARKOOGA duullimaadyadii Caalamka uga imaanaya dalka SI LOOGA HORTAGO cudurka safmarka ah e Covid-19′.
Qaar ka mid ah Beeraleyda oo ka soo jeeda Magaaladda Meru ayaa sheegay in suuqooda ugu weyn uu ahaa Somalia.
Wargeyska Daily Nation oo Warkan faafiyay ayaa waxaa uu ganacsatada kasoo xigtay in qaadka noocaan oo kala ah uu qasaarayo hadii uusan dhofin deg deg ah helin.
Gudoomiyaha Ganacsatada qaadka Miiraaga ah Moses Lichoro ayaa ugu yeeray Madaxweynahooda Uhuru Kenyatta inuu xariir deg deg ah la sameeyo Madaxweynaha Somalia Maxamed C / llaahi Farmaajo si loogu fasaxo kaarkoogii qaadka ee Somalila
Mr Lichoro wuxuu sheegay in beeralaydu ay qasaareen hanti badan kadib markii dulimaadyada ay istaageen sedex bil kahor taas oo si weyn hoos ula dagtay daqligii soo geli jiray.
Sargaalkan ayaa sidoo kale sheegay in maadamaa Qaadka Miraaga ah ee ay soo saaraan aanan laga isticmaalin inta badan gudaha Kenya ay hatan beeraha buux dhaafiyeen, sidoo kalana ay lacago yar dadka deegaanka qaadka uga iibiyaan.
”Waxaan isticmaalnay keydkeenii, hadda beeraleyda xataa ma haystaan wax ay cunaan, maxaa yeelay meel aan qaadka u iibgeyno malahan, Xaaladda ayaa kacsan, Madaxweynahana waa inuu ku deg dego in dib loogu furo ilaha dhaqaalaha, uuna arintaas kala hadlo dalka aan deriska nahaysi ay duulimaadyadda kaarkooga u ogolaadaan, ”ayuu yiri Mr Lichoro.
Sargaalkan ayaa hadalkiisa ku daray in wax ka badan 50 Shaqaalaha Shirkadiisa qaadka ay gabi ahaanba qasaareen oo ay shaqadooda waayeen
Mr Bernard Mwiti, oo ah qaad gade hore ayaa ku dooday in qaadka uu maalintii ka heli jiray lacag gaareysa 5 Boqol oo kun laakiin hadda uu wax ka yar 50 kun oo Shilinka Kenya ah ka helo.
Ms Felicity Makena, oo ah Beerale kale, ayaa sheegtay in xiritaanka maamulka hawadda Soomaaliya ay saameyn xun ku yeelatay dhaqaalihii kasoo geli jiray jaadka
“Waxaan ka dalbaneynaa Madaxweynaha inuu u aqoonsado qaadka miraa inuu yahay dalag lacageed. Miraa waa isha koowaad ee dakhliga deegaanka Kabuitu laakiin suuq la’aan, waynu dhibaatoon doonaa. Madaxweynaha waa inuu si deg deg ah u xaliyaa arintan si uu inoo bad baadiyo, ayay tiri Ms Makena.
Dowladda Soomaaliya ayaa xirtay hawadeeda waxayna xayirtay duulimaadyadda wada Kaarkooga oo aan ka ahayn sahay caafimaad, dabayaaqadii bishii Maarso markaas oo uu soo gaaray cudurka Covid-19 Somalia.
Wargeyska Daily Nation ayaa sheegay in Go’aanka Somalia uu halis geliyay dhaqaalaha Kenya.
Horraantii Juun, dawladda Soomaaliya ayaa lagu soo warramey in ay ruqsad kala laabatay laba shirkadood oo tahriibin qaad ku gelineysay Somalia, waxaase ay ku andacoodeen iney sahay caafimaad wadaan.
Sida laga soo xigtay Ururka Ganacsatada Qaadka Miraaga, Soomaaliya ayay u dhoofin jireen ilaa 50 tan oo miraa ah maalin kasta taas oo lagu qiimeeyay lacag ahaan Sh100 milyan.
SOMALIA iyo Kenya ayaanan xariirkodu wanaagsaneyn tan iyo markii labada dal ay ku kala tageen arinta Badda oo dacwadeedu taal maxkamadda QM.
Madaxweynaha Somalia ayaa horey ugu eedeeyay Kenya iney faragelineyso siyaasadda gudaha Somalia gaar ahaan Jubbaland, laakiin hada Waxaa ay arintu ku foorartaa Nairobi oo uu xaalku ku xun yahay maadaama aysan bad-na heyn dhaqaalihii Somalia kasoo geli jireyna uu istaagay.